ဘောလုံးလောကမှာ ထူးထူးခြားခြား အယူသီးတဲ့ဖြစ်ရပ်များ
ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ရပ်များ (၁)
2 Oct 2018 . 12:16 PM
အနောက်နိုင်ငံသားတွေက အာရှတိုက်က လူတွေထက် အယူပိုသီးတာကို ပရိသတ်တွေ လက်ခံရဲ့လား။ နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက်တိုးတက်နေပါစေ၊ အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အယူသီးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ဟာသဆန်ဆန်ပါပဲ။ ဘောလုံးလောကမှာလည်း အယူသီးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ အပြစ်လည်း မဆိုသာပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ရပ်များ အပိုင်း(၁)ကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ဘလန့် Blanc နဲ့ ဘားသက်ဇ် Barthez
ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဘလန့်နဲ့ ဘားသက်ဇ်တို့ရဲ့ ပွဲမစခင် အပြုအမူက ရီစရာကောင်းပါတယ်။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို မီလိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပွဲမခင် ဘလန့်က ဘားသက်ဇ်ရဲ့ ခေါင်းပြောင်ပြောင်ကြီးကို နမ်းတာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်တာက ပြင်သစ်အသင်း ရလဒ်ကောင်းတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပြီး တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမလား၊ အံ့သြစရာလို့ပဲ ဆိုရမလား။ အဲဒီနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပြင်သစ် ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။
ကွင်းထဲမှာ ဆားတွေ ပက်ခဲ့တဲ့ Pisa အသင်းပိုင်ရှင်
အီတလီကလပ် Pisa အသင်းပိုင်ရှင် အန်ကွန်နီတာနီ Anconetani ရဲ့ ယုံကြည်မှုကလည်း တစ်မျိုးပါ။ သူက သူ့အသင်းကစားမယ့်ပွဲမတိုင်ခင် ကွင်း မြက်ခင်းပေါ်မှာ ဆားတွေ ပက်ကြဲလေ့ရှိပြီး ဒါက အသင်းကို ရလဒ်ကောင်းစေတယ်လို့ ယူဆခဲ့တယ်။ အသင်းကြီးတွေနဲ့ တွေ့ပြီဆိုရင် ဆားတွေ အများကြီး ပိုပက်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
ကာဒစ်ဖ်အသင်းရဲ့လိုဂို အရောင်ပြောင်းခဲ့တဲ့ အသင်းပိုင်ရှင်
ဝေးလ်စ်ကလပ် ကာဒစ်ဖ်အသင်းပိုင်ရှင် မလေးရှားသန်းကြွယ်သူဌေး ဗင်းဆင့်တန် Vincent Tan ဟာ အနီရောင်က သူ့အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အသင်းရဲ့ လိုဂိုကို အပြာရောင်ကနေ အနီရောင်ပြောင်းဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ထူးခြားတာတစ်ခုကလည်း ဗင်းဆင့်တန်ဟာ သူ့ အသင်းနည်းပြ ကစားသမားသစ် ခေါ်မယ်ဆိုရင် မွေးနေ့မှာ (၈)ဂဏန်းပါတဲ့ ကစားသမားတွေကိုပဲ ဦးစားပေး ခေါ်ယူစေခဲ့တာပါပဲ။
ကွင်းထဲမှာ အပေါ့သွားလေ့ရှိတဲ့ ဂိုးသမား
တစ်ချိန်က အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ဂိုးသမား Sergio Goycochea ကတော့ ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်တဲ့ အစွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကွင်းထဲမှာ အပေ့ါသွားရင် ရလဒ်ကောင်းတတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ အစွဲရသွားတာက ဒီလိုပါ။ ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနဲ့ ဆုံတွေ့တော့ ပွဲကစားချိန်အတွင်း အဖြေမပေါ်လို့ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရပြီး အဲဒီအချိန်မှာ Sergio Goycochea က အရမ်း အပေ့ါသွားချင်တဲ့အတွက် ဒိုင်လူကြီးကို ခွင့်တောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ ခွင့်ပြုလို့ မရတာကြောင့် Sergio Goycochea က ကွင်းထဲမှာပဲ ကိစ္စရှင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ Sergio Goycochea ပယ်နယ်တီ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ အာဂျင်တီးနားအသင်း အဲဒီပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ အဲဒီလို ထပ်လုပ်တော့လည်း နိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂျာမနီနဲ့ ကစားတော့ Sergio Goycochea အပေ့ါ မသွားလို့လားမသိဘူး အာဂျင်တီးနား (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးတော့တာပါပဲ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း Sergio Goycochea တစ်ယောက် ကွင်းထဲမှာ သေးပေါက်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်သွားပါတော့တယ် . . .
Photo:Greats Of The Game,Gentside Sport
ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး လုပျရပျမြား (၁)
အနောကျနိုငျငံသားတှကေ အာရှတိုကျက လူတှထေကျ အယူပိုသီးတာကို ပရိသတျတှေ လကျခံရဲ့လား။ နညျးပညာတှေ ဘယျလောကျတိုးတကျနပေါစေ၊ အနောကျနိုငျငံသားတှရေဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အယူသီးတဲ့ လုပျရပျတှကေ ဟာသဆနျဆနျပါပဲ။ ဘောလုံးလောကမှာလညျး အယူသီးတဲ့ လုပျရပျတှလေညျး ရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြနဲ့ ကိုယျဆိုတော့ အပွဈလညျး မဆိုသာပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး လုပျရပျမြား အပိုငျး(၁)ကို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
ဘလနျ့ Blanc နဲ့ ဘားသကျဇျ Barthez
ပွငျသဈဂန်ထဝငျကွီးတှဖွေဈတဲ့ ဘလနျ့နဲ့ ဘားသကျဇျတို့ရဲ့ ပှဲမစခငျ အပွုအမူက ရီစရာကောငျးပါတယျ။ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို မီလိုကျတဲ့ ပရိသတျတှေ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပှဲမခငျ ဘလနျ့က ဘားသကျဇျရဲ့ ခေါငျးပွောငျပွောငျကွီးကို နမျးတာပါပဲ။ ဒီလိုလုပျတာက ပွငျသဈအသငျး ရလဒျကောငျးတယျလို့ ယူဆခဲ့ပွီး တိုကျဆိုငျမှုလို့ပဲပွောရမလား၊ အံ့သွစရာလို့ပဲ ဆိုရမလား။ အဲဒီနှဈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပွငျသဈ ပထမဆုံးခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တယျ။
ကှငျးထဲမှာ ဆားတှေ ပကျခဲ့တဲ့ Pisa အသငျးပိုငျရှငျ
အီတလီကလပျ Pisa အသငျးပိုငျရှငျ အနျကှနျနီတာနီ Anconetani ရဲ့ ယုံကွညျမှုကလညျး တဈမြိုးပါ။ သူက သူ့အသငျးကစားမယျ့ပှဲမတိုငျခငျ ကှငျး မွကျခငျးပျေါမှာ ဆားတှေ ပကျကွဲလရှေိ့ပွီး ဒါက အသငျးကို ရလဒျကောငျးစတေယျလို့ ယူဆခဲ့တယျ။ အသငျးကွီးတှနေဲ့ တှပွေီ့ဆိုရငျ ဆားတှေ အမြားကွီး ပိုပကျလရှေိ့ပါတယျတဲ့။
ကာဒဈဖျအသငျးရဲ့လိုဂို အရောငျပွောငျးခဲ့တဲ့ အသငျးပိုငျရှငျ
ဝေးလျဈကလပျ ကာဒဈဖျအသငျးပိုငျရှငျ မလေးရှားသနျးကွှယျသူဌေး ဗငျးဆငျ့တနျ Vincent Tan ဟာ အနီရောငျက သူ့အတှကျ ကံကောငျးတယျလို့ ယူဆတဲ့အတှကျ အသငျးရဲ့ လိုဂိုကို အပွာရောငျကနေ အနီရောငျပွောငျးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တယျ။ နောကျထပျ ထူးခွားတာတဈခုကလညျး ဗငျးဆငျ့တနျဟာ သူ့ အသငျးနညျးပွ ကစားသမားသဈ ချေါမယျဆိုရငျ မှေးနမှေ့ာ (၈)ဂဏနျးပါတဲ့ ကစားသမားတှကေိုပဲ ဦးစားပေး ချေါယူစခေဲ့တာပါပဲ။
ကှငျးထဲမှာ အပေါ့သှားလရှေိ့တဲ့ ဂိုးသမား
တဈခြိနျက အာဂငျြတီးနားအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောဂိုးသမား Sergio Goycochea ကတော့ ဘယျလိုမှ နားမလညျနိုငျတဲ့ အစှဲတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ကှငျးထဲမှာ အပေ့ါသှားရငျ ရလဒျကောငျးတတျတယျ ဆိုတာပါပဲ။ အရငျတုနျးကတော့ အဲဒီလို မဟုတျပါဘူး။ အဲဒီ အစှဲရသှားတာက ဒီလိုပါ။ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားကှာတားဖိုငျနယျမှာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနဲ့ ဆုံတှတေ့ော့ ပှဲကစားခြိနျအတှငျး အဖွမေပျေါလို့ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူခဲ့ရပွီး အဲဒီအခြိနျမှာ Sergio Goycochea က အရမျး အပေ့ါသှားခငျြတဲ့အတှကျ ဒိုငျလူကွီးကို ခှငျ့တောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စညျးမဉျြးတှအေရ ခှငျ့ပွုလို့ မရတာကွောငျ့ Sergio Goycochea က ကှငျးထဲမှာပဲ ကိစ်စရှငျးလိုကျပါတော့တယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ Sergio Goycochea ပယျနယျတီ ကာကှယျနိုငျခဲ့လို့ အာဂငျြတီးနားအသငျး အဲဒီပှဲမှာ အနိုငျရခဲ့ပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ အဲဒီလို ထပျလုပျတော့လညျး နိုငျခဲ့ပွနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဂြာမနီနဲ့ ကစားတော့ Sergio Goycochea အပေ့ါ မသှားလို့လားမသိဘူး အာဂငျြတီးနား (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးတော့တာပါပဲ။ အဲဒီနောကျပိုငျး Sergio Goycochea တဈယောကျ ကှငျးထဲမှာ သေးပေါကျရငျ ကံကောငျးတယျလို့ အခိုငျအမာ ယုံကွညျသှားပါတော့တယျ . . .